XOG: Kadib Guushii Arsenal Iyo Kulamadii 9-Aad Ee Horyaalka Ingiriiska, Waa Sidee Miiska Kala Saraynta Premier League? – GOOL24.NET
XOG: Kadib Guushii Arsenal Iyo Kulamadii 9-Aad Ee Horyaalka Ingiriiska, Waa Sidee Miiska Kala Saraynta Premier League?
October 23, 2018 Mahamoud Batalaale
Waxaa xalay la soo gaba gabeeyay kulamadii 9 aad ee Premier league iyada oo Arsenal guul soo laabasho cajiib ah ka gaadhay Leicester City oo gool kaga hormartay waxayna Gunners muujisay horumarka wayn ee ay ku hoos samaynayso Unai Emery inkasta oo ay bilawgii xili ciyaareedkan xaalad xun la kulmeen.
Arsenal ayaa si wayn sare ugu soo qaaday hamiga xili ciyaareedka kooxdeeda kadib markii ay awooday in ay kulankii 10 aad oo xidhidh ah ay guul gaadhay tartamada oo dhan waana markii ugu horaysay tan iyo sanadkii 2007 kii oo ay Arsenal guulaysatay toban kulan oo xidhiidh ah.
Waxaa hore kulamada sagaalaad ee Premier league guul muhiim ah u sii gaadahy Manchester City, Liverpool iyo Tottenham halka kooxaha Manchester United iyo Chelsea ay barbaro ku galeen Stamford Bridge isla markaana ay dhibco iska lumiyeen.
Laakiin waxay u muuqataa in xamaasada Premier league ay hadda uun bilaw tahay isla markaana ay kooxo badani heleen joogtaynta qaab ciyaareedkooda iyada oo Gunners si cajiib ah uga soo kabsatay dhibatadii ka soo gaadhay Man City iyo Chelsea ee kulamadii furitaanka.
Arsenal ayaa soo gashay kaalinta afraad ee kala saraynta Premier League inkasta oo ay isku dhibco yihiin Chelsea iyo Tottenham waxayna saddexda kooxood ee reer London haystaan min 21 dhibcood kadib markii 9 kulan la soo ciyaaray.
Laakiin Manchester City iyo Liverpool ayaa wali isku haysta hogaanka Premier league inkasta oo Sky Blues ay farqiga goolasha ku hayso waxayna Reds iyo City haystaan min 23 dhibcood kadib sagaalkii kulan ee ilaa hadda la soo ciyaaray.
Manchester United ayaa kaalinta 10 aad ee kala badhka kooxaha Premier league ku jirta iyada oo waliba 9 dhibcood ka hoosaysa hogaamiyaasha Premier league ee Man City iyo Liverpool waxayna sidoo kale United min 6 dhibcood ka hoosaysaa kooxaha Tottenham, Arsenal iyo Chelsea oo ku jira min kaalinta shanaad ilaa saddexaad.
Haddaba halkan kaga bogo Miiska Kala Saraynta Premier League ee Kadib Kulamadii 9-aad:
Haddaba akhriste, miyaan la odhan karin Arsenal waxay ku soo biirtay kooxaha u tartamaya koobka Premier league oo hadda si buuxda ay uga soo kabsatay dhibaatadii bilawgii xili ciyaareedkan shakiga wayn lagu galiyay awoodeeda ciyaareed? Miyay Man United markeeda soo kabsan doontaa oo ay kaalmaha sare u tartami kartaa?
ABDI SANKUS says:
Haaa waa La dhihi Arsenalfc in ay u tar tarmi karti Hotyaalka sababta bilawgii waxay u ekaayeen kuwa daalan oo aad u maleysaa Holiday ku jiraan balse hada waaga in uu baryey ayey fahmeen Lknse hal mid Arsenal Kooxaxa waa weyn aad bay ugu dhibtootaa aan ka warsugno kulanka ay la leedahay Kooxda Reds ama Liverpool
Waa xili hore in awooda kooxaha aan ka hadalna balse waxa xaqiiqa in Arsenal ay tubta guusha hayso Man united na ay so noolanayso
Waa xili hore inaan ka hadalno awooda kooxaha PL balse waxa xaqiiqa in Arsenal ay tubta guusha hayso Man united na ay dib uso noolanayso
Cisa adam mohamed says:
Wa xeli hore in koox ladhaho tartanka kuma jirto koxna loosadaliyo horyalka . Kooxaha waxa lago qiimeya sida ay ula ciyarto kooxaha waweyn ee ay kula tartamayso horyalka . Hadii kooxaha wayni ay meel sarto wa sax in xeli hore loosadaliyo ku guuleysiga horyalka lakin hadey ku dhib kunoqoto sida loogaraco kooxada kulaxefiltamaysa qasab waxa ah inaadan tartanka kaalin fiican yeelindonin . Sidas daraded Arsinal iyo united 2 daba aad bey ugu dhibanyihin in ay guulkagaran kooxaha ay kuxefiltaman hanashada horyalka waxana dhihi kara booska Champions leaga ayey utartamayan oo keliya .lakin 3 koox ayu kadhexeya horyalka man City oo si awodleh weli udifacaneysa horyalka ,liverpool oo rabta in ay koob la.aanta iskarebto sanadkan iyo Chelsea oo tababare dhiig cusub kushubay kooxda la timid biliwgi horyalka
Haa haaa! Arsenal Sanadkaan way tartami kartaa wayna kasoo kabsatay labadi guul daro ee bilowgii xili ciyareedka ay kala kulantay city iyo chelsea guul insha allah #HallaGunners